AirPods Pro, sameecadaha dhagaha wax lagu garaaco | Wararka IPhone
AirPods, Apple ee iibiyaha ugu fiican sanadihii la soo dhaafay, waxay la yimaadeen tartan adag, laakiin waxay ka timaadaa gurigooda. AirPods Pro-ka cusub waxaa ka mid ah wax kasta oo isticmaaleyaal badani ay weyddiinayeen muddo dheer: joojinta buuqa, tayada codka oo wanaagsan, adkeysiga biyaha iyo dhididka, iyo naqshad cusub si fiican ugu hagaaji dhagaha.
Haysashada nuxurka AirPods (ismaamul aad u fiican, fududaanta isticmaalka iyo isku xirnaanta otomaatiga ah), Kuwani AirPods Pro waxay ku fiicnaanayaan AirPods-ka caadiga ah, in kastoo taasi ka dhigan tahay koror qiimo badan. Waan tijaabinay waana ku tusnay adiga si aad u go'aansan karto haddii kuwani ay noqon doonaan samaacadahaaga soo socda, ama haddii aad sii haysato AirPod-kaaga hore.
1 Naqshad cusub. nuxur isku mid ah
2 Waxyaabo cusub oo muddo dheer la sugayay
3 Tayada codka sare
Naqshad cusub. nuxur isku mid ah
Apple waxay rabtay inay cusboonaysiiso naqshadeynta jiilkan cusub ee AirPods si ay si cad ugaga duwanaato kuwa caadiga ah. Waxayna ku sameysay iyaga oo siinaya muuqaal caqli badan, ka yar, laakiin beddelaya nooca dhegaha: hadda waxay ku jiraan dhegta. Taasi waa in la yiraahdo, waxaa lagaa gelinayaa dhegtaada, mahadnaqa barkimooyinka dhagta silikooniga ah ee ay ku jiraanna samee shaanbad ka qayb qaadata go'doominta dibadda. Marka lagu daro ka hortagga buuqa badan ee soo maraya, suufkaasi wuxuu ka caawinayaa iyaga in si fiican loo hagaajiyo, sidaa darteed qaar badan oo ka mid ah kuwa ka cawday in AirPodyadooda ay soo dhacayaan waxay ka heli doonaan AirPodskan cusub Pro wixii ay raadinayeen. Barkimooyin kala duwan oo cabbirka dhegaha ah ayaa lagu soo daray si ay ugu habboonaadaan nooc kasta oo dhegta ah.
Sariirta xamuulka xoogaa wey ka weyn tahay, laakiin xoogaa yar, inkasta oo ay u muuqan karto mid ka weyn sababta oo ah jihada jihada cusub. Laakiin wali waxay ilaalinaysaa cabbirka ugufiican ee lagu galo jeebabka surwaal kasta, mid kamid ah sababaha guusha AirPods ee aan rajeyneyno inaysan waligood isbeddeleynin. Sanduuqaas ayaa ah midka wali loo adeegsado iskuxirahooda iyo dib u soo celinta iyaga, iyadoo la siinayo wax ka badan 24 saacadood ismaamul guud ahaan. Sameecadaha dhagaha ayaa leh 5 saacadood haddii aynaan isticmaalin joojinta buuqa ama qaabka hufnaanta, ama 4 iyo badh saacadood haddii aan isticmaalno. Marka la eego, waxay wali ku yihiin tixraac ku saabsan qaybtooda.
Waxa gebi ahaanba aan macquul ahayn waa isku xirnaanta otomaatiga ah ee mahadhada H1: fur sanduuqa AirPods daaqad ayaa ka soo muuqan doonta iPhone-kaaga si aad u sameyso xiriirka, iyo marka la dhammeeyo Waxaad horeyba uga heli doontaa iyaga oo laga heli karo dhammaan aaladaha aad ku haysato koontadaada iCloud, iyada oo aan lahayn qaabeyn dheeri ah. Sixirkan aan horeyba u caadeysanay ka dib ku dhawaad ​​seddex sano markii ugu horeysay ee AirPods weli wali waa la ilaaliyaa, si fudud ayaa la qabatimay.
Shaybaarka cusub ee silikoonku waa mid raaxo leh in la xidho, xitaa qof aan aqoon u lahayn dhegaha sida aniga oo kale. Waa inaan qiraa inay igu adkaan doonto inaan ka fiicnaado AirPods dhaqameedka, sameecadaha ugu raaxada badan ee aan waligay xirto iyo inaan dhegahayga geli karo saacado badan daal la’aan. Laakiin taasi micnaheedu maahan inay raaxo daran yihiin, intaas uun Waa inaan la qabsadaa dareenka ah inaan wax ku dhegto dhegtayda gudaheeda, anigoon wax kale isku mashquulin. Taa beddelkeeda waxaan helaa waxyaabo kale oo ka kooban dhib yar.
Waxyaabo cusub oo muddo dheer la sugayay
Tan iyo markii la bilaabay AirPods-kii ugu horreeyay, culeys badan ayaa la saaray ceebaha ugu weyn ee ay qabaan: maqnaanshaha buuqa iyo la'aanta shahaadada iska caabbinta biyaha. Labada dhibaatoba Apple ayaa ku hagaajiyay AirPods Pro-kan. Marka laga hadlayo baajinta dhawaaqa, wuxuu u sameeyay si weyn: Joojinta aan tooska ahayn mahadsanid silsiladaha silikooniga, laakiin sidoo kale nidaam tirtir firfircoon oo horumarsan oo runtii cajiib ah. Caabbinta biyaha ee ay Apple siisay ma ahan wax la yaab leh, IPX4 fudud oo kuu oggolaaneysa inaad u adeegsato inay ku ordaan ama ku socdaan roobka cabsi la'aan, laakiin barkadda waa inay ka fogaataa.
Way adag tahay in la sharaxo sida buuq baajinta u eg yahay, laakiin waxaan kuu sheegi karaa inaad runti la yaabtay markii ugu horraysay aad xirto oo aad dhaqaajiso: si lama filaan ah ayay aamusnaan kuugu dhow dahay. Dabcan dhageysiga muusikada sidan oo kale waa khibrad aad uga wanaagsan dhageysiga dhammaan buuqa ka socda waddada, tareenka dhulka hoostiisa mara ama baska. Laakiin sidoo kale waxay keenaysaa dhibaato: aad uga taxaddar inaad ku isticmaasho waddada, maxaa yeelay waxaad gebi ahaanba ka go'doomtaa adduunka dibedda waxaadna ka heli kartaa wax ka badan cabsi. Sidoo kale waa layaableh qaabka Transparency, oo ah tan iska soo horjeedka ah: waxaad maqlaysaa wax kasta oo hareerahaaga ah. Hadda uma baahnid inaad iska siisid taleefanka dhegaha marka qof kula hadlayo, maaddaama oo aad dhaqaajiso qaabka hufnaanta waxaad maqli doontaa wax kasta oo ay ku dhahaan adoo ku mahadsan xaqiiqda ah in makarafoonnada samaacadaha dhagaha ay u gudbin doonaan dhegahaaga.
Astaamahan cusub waxay la yimaadaan kontaroolo cusub. Ha iloobin dharbaaxo ku timid AirPod-kaaga maxaa yeelay hadda waa inaad riixdaa jirida dhagaha dhagaha si aad amar ugu siiso. Xakamaynta dib u soo celinta iyo dhaqaajinta hababka baajinta ama daahfurnaanta ayaa suurtagal ka ah labada headphones midkood, oo waxaan haysannaa xadad gaar ah oo qaabeynta ah, laakiin wali ma hayno xakameyn mug leh. Dabcan, ma hilmaami karno inaan Siri ku codsan karno kaliya codkeena, annaga oo aan taabanin AirPods gabi ahaanba sidaasna ugu sheegno inay kor u qaaddo ama ay hoos u dhigto codka, ama u yeerto mid ka mid ah xiriiradayada.
Tayada codka sare
Halkan shaki kuma jiro: tayada codka ee AirPods Pro ayaa ka sarreeya tan AirPods. Waana labadaba adeegsiga baajinta dhawaaqa iyo la'aanteed. Laakiin dabcan way sii cadahay markii aan ka go'doomnay bannaanka oo aan ku raaxeysan karno dhammaan miyuusigga muusigga aan dhegeysaneyno. Dhawaaq awood leh, baas wanaagsan iyo wixii ka sarreeya oo ah dhawaq aad isu dheellitiran oo noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano waxyaabo fara badan si fudud aan qiimo lahayn oo leh AirPods caadi ah. AirPods Pro waxay ku jirtaa heerka sameecadaha dhegaha kale ee ugu sareeya, haa, oo leh qiimo aad u la mid ah.
Tayada codka, shaqooyinka iyo naqshadeynta, AirPods-ka cusub Pro wuxuu ka fiicanyahay AirPods dhan walba, inkasta oo ay sidaa ku sameeyaan qiime cusub oo "dhegta" ah oo qof walba uusan aqbalin, isla markaana leh qiimo koror weyn. Joojinta dhawaaqa ayaa runtii ah mid layaableh marka loo eego cabirka yar ee sameecadaha, qaabka Transparency-ka ayaa ah mid aad waxtar u leh in laga warqabo hareerahaaga adigoon ka saarin dhagaha. Nidaam cusub oo koontarool ah oo ka tagaya qol yar oo loo habeeyo, iyo ismaamul ku sii hadha ugu fiican qaybtiisa, si badeecad qiimo ahaan loogu talagalay tan ugu baahida badan, laakiin taasi runti ma niyad jabi doonto. Waxaad ka iibsan kartaa iyaga Apple € 279.
Naqshadeynta iyo dhisidda tayada
Joojinta buuqa iyo jawiga jawiga
Isku xirnaanta otomaatiga ah
Dhegta gudaheeda, taas oo u sahli karta isticmaaleyaasha qaarkood
Ka baxsan nidaamka deegaanka ee Apple, astaamaha xaddidan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » AirPods Pro, sameecadaha dhagaha ee cusub ee la garaaco
In tayada codka shaki la’aan ay kafiican tahay ... Aad ayaan ugu faraxsanahay koofiyadahaan (waxaan adeegsanaayay jiilkii uguhoreeyay muddo ku dhow 3 sano). Oo waxay i siinaysaa dareenka ah inay u egyihiin si isku mid ah, ama kala duwanaansho aan la dareemi karin. Waxaan ku iibsaday iyaga 5 daqiiqo gudahood markii aan ka soo baxayay rabitaankii aan kuu qabay. Laakiin xoogaa waan niyad jabay. Joojinta sawaxanka waa hagaagsan tahay. Aamusnaantaas ayaa la sameeyay ... Mashiinnada baabuurta iyo shanqarta mashiinka ayaa joojiya dhawaaqa (qaboojiyeyaasha oo dumaya). Laakiin waad maqleysaa dadka oo hadlaya (aamusnaan ah), waxaadna maqleysaa jugta waxyaabaha ...
€ 279 ¿?… Laakiin miyay mobaylka hadiyad ahaan ama wax kale u keenaan?
Waan ka xumahay saaxiib, mararka qaar waxaan u arkaa nacasnimo, mar dambe ma dhici doonto
Muuqaalka ayaa taageeri doona waxqabadka 'Split View', ku dar a ha dhibin hab iyo fayl smart